FAQs - Shandong Buluoer Intelligent Technology Co., Ltd.
Seratera laser tariby
Fanontaniana: Ahoana no manome antoka ny milina fanapahana laser an'ny fibre ho an'ny karbaona vy sy vy tsy miangatra?
Re: a1. CNC Fiber Laser Cutting Machine ho an'ny karbona vita amin'ny vy vita amin'ny vy sy ny vy matevina dia 12 volana aorian'ny ora BL;
a2.12 ora hevitra fanohanana ara-teknika;
A3. Orinasa masinina manokana, izay afaka mifehy ny kalitaon'ny kojakoja amin'ny kalitao avo lenta;
A4. Ny trano fanatobiana entana sy mpampiasa azy manokana dia afaka mankafy ny vidin'ny agents.
B. Fanontaniana: Manao ahoana ny ora fanaterana?
Re: Afaka mandefa ireo milina ao anatin'ny 15-25 andro isika raha manana ny masinina ao anaty tahiry.
Ny fotoana fanamboarana milina mahazatra dia 5-7 andro ary ny fotoana vita amin'ny masinina CNC dia eo amin'ny 25-45 andro.
vokatra, ny fotoana fanaterana dia homena aorian'ny fanamafisana.
C. Fanontaniana: Manao ahoana ny fandoavana?
Re: 50% ny sandan'ny tahiry sy ny fifandanjanana dia tokony aloa amin'ny T / T na LC raha vao jerena alohan'ny handefasan'ny mpivarotra ny milina
D: Fanontaniana: Inona ny fonosana?
Re: manana fonosana 3 sosona izahay. Ho an'ny ivelany dia mandray ny raharaha fanaovana asa-tanana izahay. Ao afovoany dia voasaron'ny foama ny milina, hiarovana
ny milina avy amin'ny hozongozonina. Ho an'ny sosona anatiny dia rakotra kitapo plastika matevina ho an'ny rano ny masinina.
E: Fanontaniana: Ahoana no hataoko raha diso ny masinina?
Re: Raha sendra olana toy izany ianao dia mifandraisa anay ary aza manandrana manamboatra ilay masinina irery na olon-kafa.
Q1: Ahoana ny momba ny warranty?
A1: 2 taona fiantohana kalitao, ny masinina misy ampahany lehibe (tsy ankoatry ny fanjifana) dia novaina maimaimpoana (faritra sasany no tazonina) raha misy ny olana mandritra ny vanim-potoana fiantohana.
F2: 2 Tsy haiko hoe iza no mety amiko?
A2: Azafady mba lazao ahy ny momba anao
2) Fitaovana sy hatevin'ny fanapahana :: misafidy hery mety indrindra.
A3: Ny antoka amin'ny varotra Alibaba / TT / West Union / Payple / LC / Cash sy ny sisa.
Q4: manana antontan-taratasy ve ianao ho an'ny fanadiovana ny fomba amam-panao?
A4: Eny, manana.Ao aloha dia hasehontsika anao ary rehefa avy ny fandefasana dia omenay anao ny lisitra Packing / Fifanarahana varotra / Famarotana varotra / fanaovana volavolan-dalàna momba ny famafana.
A5: 1) Mampandeha horonantsary izahay, afaka mianatra tsikelikely ianao, ary azonay avela eo anilanao ny teknisianina hampiofanana anay.
2) Raha manana olana ianao mandritra ny fampiasana dia mila ny teknisiana mpitsara anao ianao
Ho voavaha amintsika ny olana any an-kafa. Azontsika atao ny manome mpijery ekipa
/ Whatsapp / Email / Telefaona / Skype miaraka amin'ny cam mandra-pahatapitra ny olanao rehetra. Afaka manome serivisy varavarana koa ianao raha mila izany.
F6: Fotoana fanaterana
A6: Fanitsiana ankapobeny: 7 andro. Namboarina: andro fiasana 7-10.
Raha te hahalala ianao raha afaka miasa amin'ny fitaovana ny milina, dia lazao amiko:
1. Inona ireo fitaovana tianao hotapahina?
Fa nanapa-kevitra ny haben'ny miasa ny milina.
Raha vantany vao miresaka amiko momba izany ianao dia afaka manoro anao ny milina sahaza indrindra sy ny vidiny tsara indrindra ho anao. Na afaka manamboatra iray ho anao izahay.
Sambany aho mampiasa ity karazana milina ity, mora ve ny miasa?
1. Ny horonan-tsary sy torolàlana amin'ny torolàlana anglisy dia alefa maimaimpoana miaraka amin'ny router cnc.
2. Mazava ho azy fa fampiofanana maimaimpoana ao amin'ny orinasa misy anay. Ny injeniera dia misy afaka manompo any ampitan-dranomasina fa ny fandaniana rehetra dia mila aloa eo anilanao.
3. Fanohanana ara-teknika 24 ora amin'ny alàlan'ny fiantsoana, horonan-tsary ary mailaka.
30% T / T mialoha, 70% T / T alohan'ny fanaterana.
Rehefa avy nahazo ny petra-bolanao izahay dia handamina ny famokarana, mandritra ny vanim-pamokarana, hitatitra ny kalitaon'ny famokarana, ny fivoaran'ny vokatra izahay hahazoana antoka fa hifehezana tanteraka ny mpanjifa, mandritra izany fotoana izany dia halefa amin'ny mpanjifa ara-potoana ny sary sy horonan-tsary ary rehefa azon'izy ireo antoka fa marina ny zava-drehetra ok, afindra ny fifandanjana ary manamboatra milina fanaterana izahay.